“Qofka ubadkiisa hagaajiya, amaanadii wuu ka soo baxay, kii kalena khiyaamo ayuu sameeyey loo qabsan doono…” Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir, ayaa sheegay in qofka ubadkiisa hagaajiya, ka soo baxay amaanadii, kii kalena khiyaamo sameeyey la weydiin doono aakhiro, isla markaana hoosta ka xariiqay in awlaadu tahay mustaqbalka dalka, dadka iyo diinta, isla markaa mudan yihiin in loo dedaalo daryeelkooda.
Sheekh Maxamed oo faahfaahin ka bixinayey in ubadku amaano la inoo dhiibay yahay ayaa ku bilaabay, “Ilaahay waxuu amaanay kuwa ilaaliyey amaanadooda. Amaanada haddaynu u naqaanay lacag la uruuriyo way ka balaadhan tahay, ta koowaad waa ta diinta, ta labaadna, waa ta dadka. Qofka ubadkiisa hagaajiya, amaanadii wuu ka soo baxay, kii kalena khiyaamo ayuu sameeyey loo qabsan doono.
Gudashada amaanada Ubadka Ilaahay quraanka ayuu inoogu sheegay ugu horeyn inaynu naar ka badbaadino, ayuu yidhi, “Kuwa Iimaanka laga helow, nafahiina & ehelkiina naar ka badbaadiya. Waxaad kaga badbaadinayso naartana, waa inaad cibaadada Ilaahay iyo salaada fartid.
Sheekh Maxamed oo ka hadlayey dariiqyada loo marro tarbiyada ubadka, ayaa yidhi, “Waalidka iyo qof kastoo wax rabaynaya waxaa looga baahan yahay inay ku dayasho wanaagsan noqdo. Ubadku inta ay dhegta wax ka qaataan, inta ay isha ka qaataan ayaa ka muhiimsan. Qofka wax tarbiyadaynaya waxa waajib ku ah ilaalinta waxuu rabaynayo. Waalidku waa inuu wacdi u jeediyo ubadkiisa, sidii Luqmaan Alxakiim Ilaahay Quraanka inoogu sheegay. ‘Inankaygoow salaada oog, waxa wanaagan dadka far, waxa xun u diid, sabirka ogow’.
Sheekh Maxamed oo ka hadlayey arrimaha ubadka loo baahan yahay in laga ilaaliyo ee dariiqa toosan ka leexiya, ayaa yidhi, “Hadaanu waalidku aqoon u lahayn cilmiga tarbiyada ubadka, oo keliya in la dhalo, la dhergiyo, la sii daayo u haysto, caruurta adigaa dayacay waalidoow.
July 3, 2016 July 3, 2016 Mohamed Ibrahim
Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE oo koobab guddoonsiiyey Kooxaha tartannadan ku guulaystay + Muuse Biixi oo orod uu ku wareegay garoonka Xawaadle kaga mahadceliyey soo dhawayn loo sameeyey Hargeysa – (warsoor ) – Guddoomiyaha KULMIYYE, ahna murrashaxa Madaxweynaha ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka qaybgalay xidhitaanka tartamo kubadda cagta ah oo bisha Barkaysan ee Ramadaan […]
August 17, 2016 Mohamed Ibrahim
Two goals from Manchester City new boy Gabriel Jesus and skipper Neymar helped Brazil book a spot in the men’s Olympic football final with a 6-0 semi-final success over Honduras. The result never looked in doubt once Neymar had capitalised on a poor error to break the deadlock after just 15 seconds. Jesus then took centre […]
July 10, 2018 Mohamed Ibrahim
Hargeysa – (warsoor) – Tartanka kooxaha heerarka koobaad, labaad iyo sadexaad ee (FA Cup-ka) ayaa dhawaan lagu wadaa in Xidhiidhka Kubadda Cagta Somaliland ka furaan Garoonka weyn ee Hargeisa Stadium. Tartankan waxaa maal-galisay shirkadda Iskaadhsiinta Casriga ah ee Telesom. Tartankan oo ay ka qayb galidoonaan 28 Kooxood ayaa diyaargarawgiisu gabogabo ku dhawyahay iyadoo lasoo saaray […]